Amabinzana amabhinqa angama-chingonas Discover Discover Discover online ▷ ➡️
Uninzi lwezintlu zamabinzana zilawulwa ngabantu. Ayisiyo yokuba isini sobudoda yinto embi, ngokuchaseneyo. Kodwa abasetyhini banobulumko obukhulu emazwini abo, kwaye kufanele kwabelwane ngokulinganayo ukubenza babonakale ngakumbi. Kwaye licebo elihle lokwenza oku ngeFacebook nakwezinye iinethiwekhi zentlalo.
1 Amagqabantshintshi e-engonas abasetyhini
2 Amabinzana amabhinqa mops
3 Amabinzana apholileyo amabhinqa
4 Iividiyo zamabinzana amabhinqa aseChingonas
Ubomi bungumngcipheko. Ngamanye amaxesha iyasebenza kwaye ngamanye amaxesha ayisebenzi. Yinto ehlekisayo leyo, ukungazi ukuba siyakuba yintoni isiphumo. - UScarlett Johansson
Yonke impumelelo, enkulu okanye encinci, iqala engqondweni yakho. -Umary Kay Ash
Umfazi ngaphandle kwendoda ufana nentlanzi engenabhayisekile. -Gloria Steinem
Umsindo awunakusombulula nayiphi na ingxaki. -UGrace Kelly
Ukuzimela geqe lulonwabo-uSusan B. Anthony
Ndizipeyinta kuba ndizazi ngcono. - UFrida Kahlo
Asizalwanga njengomfazi, kodwa siba banye. -USimone de iBeauvoir
Ukholelwa ukuba ubaluleke ngaphezu kwakhe nabani na, kodwa njengaye wonke umntu. -Agatha Ruiz de la Prada
Umdaniso: okona kubukrelekrele kumzimba okhululekileyo. -Isadora Duncan
Asinakho ukuvumela umbono olinganiselweyo wabanye uphele usichaza. - UVirginia Satir
Xa ndiyila, ngamanye amaxesha ndinamava endinokuwachaza njengombono. -Silvia Fendi
Ukuba sifuna ukulumka, akufuneki sithathe ukuzithemba okuphezulu njengesiqinisekiso sento ethile. -U-Elizabeth Loftus
Ixesha elidlulileyo lidlulileyo kwaye alisayi kubuya. - IDonatella Versace
Umfazi uthatha isigqibo sendlela yokunxiba, kwaye umyili ungumcebisi nje. -UStella McCartney
Ukuba awukwazi ukundinika imibongo, ungandinika inzululwazi yesayensi. - UAda Lovelace
Eyona nto ibalulekileyo ngabo bahlobo ubatsalela umnxeba nge-4 kusasa. - UMarlene Dietrich
Asisoze sazi ukuba luncinci kangakanani uncumo olunokukwenza. -Umama Teresa waseCalcutta
Ukuba ufuna ukuhamba kude, akukho nqanawa ingcono kunencwadi. -Emily Dickinson
Mamela ngentloko, kodwa vumela intliziyo yakho ithethe. -Marguerite I-Youcenar
Asiziboni izinto njengoko zinjalo, kodwa sizibona njengoko sinjalo. - UAnais Nin
Ebumnyameni, izinto ezisijikelezileyo azibonakali ziyinyani ngaphezu kwamaphupha. - UMurasaki Shikibu
Abo bangashukumiyo abawaqapheli amatyathanga abo. -Rosa Luxemburg
Amabinzana amabhinqa mops
Imfundo sisinxibo esiphambili somnyhadala wobomi. - UCarolina Herrera
Ubuhle yindlela oziva ngayo ngaphakathi, kwaye iyabonakaliswa emehlweni akho. -USophia Loren
Utoliko lwangaphakathi, kodwa kufuneka lubekwe ngaphandle. -USarah Bernhardt
Xa isidenge sikubiza njengehenyukazi, kungenxa yokuba ibingenakukuphanga. - UDolores Redondo
Ukonwaba emtshatweni ngumbandela wamathuba amsulwa. UJane Austen
Eyona ngozi inkulu kwikamva kukungakhathali. -UJane Goodall
Ubomi buya kuba mnandi kakhulu ukuba siyazi ukuba masenze ntoni ngayo. -Greta Garbo
Umdaniso ngumbongo ekuthi intshukumo nganye yawo ibe ligama. -Bulala hari
Ukuphila kufana nokuhamba kwimyuziyam: kulapho uqala ukuqonda oko ukubonileyo. - U-Audrey Hepburn
Ndiyathanda ukubamba abantu, sisenzo esiza ngokwendalo kum, asihleliwe kwangaphambili, sivela emazantsi entliziyo yam. - UDiana wase Wales
Ihlala ilula eyenza ukuba kumangaliswe. -Amelia Barr
Iiflegi kufuneka ziphakanyiswe kuphela ukuba azivunyelwanga, kungenjalo ziyimihombiso kunye namabango eehotele kunye neenqanawa. -Rosa Regás
Ukwaluphala asikuko kwababuthathaka. -UBette Davies
Ukushiya iinyani kodwa ziintlobo ezahlukeneyo zobuxoki. - UAlmudena Grandes
Amabinzana apholileyo amabhinqa
Ixesha ledinga elingagqibekanga el mundo kufuneka uqiniseke ukuba kuninzi okunokuzuzwa xa sinxibelelana nabanye; ukuba iyantlukwano ngokwenene ingamandla kwaye ayisosongelo. -U-Elizabeth II wase-United Kingdom
Ndisoloko ndifuna ukubonisa ukuba abafazi banamandla. - UClaudia Cardinale
Imibongo ivula iifestile ezincinci ngeentsuku, kwimihla ngemihla. Ziyasivumela ukuba sibone inyani eyahlukileyo. -USusanna Tamaro
Andizange ndirhuqelwe kwizilogeni, ngenxa yoko andiphoxeki. -Usoledad Puértolas
Ukuba ulandela yonke imigaqo uyaphoswa lulonwabo. - UKhatharine Hepburn
Nawuphi na umfazi oziqondayo iingxaki zokuqhuba ikhaya usondele kakhulu ekuqondeni iingxaki zokuqhuba ilizwe. -Margaret Thatcher
Iividiyo zamabinzana amabhinqa aseChingonas